စက်တင်ဘာထာဝရ: ဖိုးသောကြာရဲ့၏-အာရိုက်နိုင်ငံရေးမှာ ရုန်းထွက်ကြစေလို ဆောင်းပါးသို့ အရှင်ထာဝရမှာ တုန့်ပြန်စာ
ဖိုးသောကြာရဲ့၏-အာရိုက်နိုင်ငံရေးမှာ ရုန်းထွက်ကြစေလို ဆောင်းပါးသို့ အရှင်ထာဝရမှာ တုန့်ပြန်စာ
အခုလိုစာရေးသာပြီး ပြောဆိုလာတာကို ဦးဇင်း အသိမှတ်ပြုတန်းဖိုးထားပါတယ်။အမှန်းတရားဆိုတာ ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးဆိုတာအားလုံးအသိပါပဲ။အခုလိုဝေဖန်းထောက်ပြတာ ကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားချင်ပါတယ်။ဦးဇင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ့ တရားမ၀င်စာအုပ်လုပ်ပြီး အမိမြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေး အတွက် နိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကို သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုမြှောက်များစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နော်ဝေကို အစည်းဝေတက်ဖို့ အကြောင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သံရုံးက ဗီဇာထုတ်ပေးဖို့ အကြိမ်းကြိမ်းခေါ်တွေခဲ့ပါတယ်။တစ်ကယ်သွားဖြစ်မယ် ဆိုရင်လည်း ပြန်ရောက်တာနဲ့သံရုံးမှာ လက်မှတ်လာထိုးဖို့မှာလိုက်ပါတယ်။ဦးဇင်း ဒီနေ့ရာမှာအားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့ အခုလိုဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာလည်း ဦးဇင်းဆုံးဖြတ်ချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့စည်းကမှာ ထောက်ခံပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီး*FBEအဖွဲ့စည်းနဲ့မသတ်ဆိုင်ပါကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ဦးဇင်းတို့အစည်းဝေလာတက်တာ ဘယ်အဖွဲစည်းကမှာ ငွေပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ဦးဇင်းရဲ့ရင်နှီတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကသာ ထောက်ပံ့ကူးညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုစာရေးလာသူရဲ့ မှားယွင်နေတာ တစ်ခုကို ထောက်ပြချင်းပါတယ် အဲဒါကတော့ ဒိန်းမတ်မှာ အဆိုင်လင့်လျှောက်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ယူတိုးနိုင်ငံတွေရဲ့လောကို နားမလယ်လို ပြောတာလိုထင်ပါတယ်။အမှန်တစ်ကယ်လျှောက်ချင်းရင် ဗီဇာရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာပဲ ပထမဆုံးလျှောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဦးဇင်းအခုလိုလုပ်ခဲ့တာလည်း အားလုံးကို အသိပေးပြီး လုပ်ခဲ့တာဖြစ်နေလို့ ဘာမှာပြောစရာမရှိပါဘူး။တစ်နေကျရင် ဒီလိုဝေဖန်းရေးသားလာမယ် ဆိုတာကို ကြိုးတွက်ထားပြီးသားပါပဲ။ဦးဇင်းပြန်မေးချင်တာကတော့ ခင်ဗျာတို့ပြောနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်းအခွင့်ရေးကို လေးစားလိုက်နာမယ် ဆိုရင် အခုလို့စာရေနေစရာမလိုပါဘူး။ဒီမိုကရေစီလိုပြောပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းကျမနေတက်တဲ့ ခင်ဗျာတို့လို့လူတွေရှိနေသ၍တော့ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက် ဗိုလ်ချုပ်စကားနဲ့ပြောရရင် ခင်ဗျာတို့ စောက်ကျင့်တွေကို ပြင်ကြပါလို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ပြောတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများတဲ့ လုပ်နေပြောနေတာက စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုပြိုခွဲနေတာပါပဲ။
တစ်ဆက်ထဲ ထက်ပြောပါအုံးမယ် သမိုင်းဆိုတာ မရှိရင်လည်း အသာနေပါ အခုလိုတိုက်ခိုက်နေလို ခင်ဗျာအတွက် အကျိုးရှိပါလား ဦးဇင်းလုပ်ရက်အတွက် ဦးဇင်းမှာ တာဝန့်ရှိပြီးသားပါ အဲဒီကဖြစ်လာမယ် အကျိုးဆက်ကိုလည်း တွက်ထားပြီးသားပါ။လုပ်သင်လုပ်ထိုက်လို လုပ်တယ်လိုပြောပါရစေ။ မြန်မာတွေရဲ့စောက်ကျင့်တွေမကောင်းလို အခုလိုဒီမိုကရေစီနဲ့ဝေနေတာက ခင်ဗျာတိုကြောင်ဆိုတာ သိပါလား နောက်တက်လာတဲ့ လူငယ်တွေကို နေရာမပေးချင်းတဲ့ အတွက် စစ်အုပ်စုထောက်လှမ်းရေးပါလို စွပ်ဆွဲပြောချင်ရာပြောနေတဲ့ ခင်ဗျာတို့လို့ နိုင်ငံရေးသာမားလို့ အသံကုန်ဟစ်နေတဲ့ လူတွေကြောင် မြန်မာနိုင်ငံရေဟာ ရှေ့ကိုရောက်သင်ပါလျှက်မရောက်တာ အခုလိုစိတ်ထားတွေကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး ပြည်တွင်းက လူတွေကိုပဲ အပြစ်တင်နေတဲ့ ခင်ဗျာတို့ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ဟန်းပြလုပ်ပြီး ဘေးထိုင်ဘုပြော ကိုယ်နဲ့စိတ်သဘောထားချင်းမတူးရင် အပြစ်ဖို့ အပြစ်ပြောဖို့လောက်ပဲ တက်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျာတိုနဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့ အချိန်ကစလိုသိခဲ့ရပါတယ်။ခင်ဗျာတို့ပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ လွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးပါတယ်။လေးစားတန်းဖို့ထားတယ် ဆိုတာဒါတွေပဲလား၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အမည်ခံပြီး ဘ၀တူး အကျဉ်းကျသူတွေအပေါ် စာနာထောက်ထားဘူးပါလား၊ကိုယ်ရဲ့မိသားစုကို ပြည်ပခေါ်ထုတ်ဖို့ လုပ်နေတာကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို ပြောတာလား။တိုင်းပြည်ကို ရှောင်စားလိုဝကာမှာ မင်းတို့မလုပ်ကြနဲ့ပြောနေလိုရမှာလား၊ခင်ဗျာတို့ကိုယ်တိုင်း အစကောင်းအောင် လုပ်ခဲ့ပါလား။အခုမှာ သူများလုပ်တာကို အားမပေးတဲ့ အပြင်တိုက်ခိုက်နေတာကိုယ်က ခင်ဗျာကိုယ်တိုင်း လူလိမ်ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တချိန်က ရင်ကော့ပြီး မော်ကြွားနိုင်ခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ ရွှေမြန်မာတွေဟာ ခုတော့ သူတပါးနိုင်ငံမှာ (ကျွန်) အဖြစ်ကုန်း ရုန်း လုပ်နေကြရပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလည်း တရုတ်ရဲ့ စီးပွာရေး (ကျွန်) ဖြစ်ကြရပြီး ဒီအတိုင်း သွားရင် ရေရှည် မှာ တရုတ်က မြိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျာ မသိဘူးလား။ ထိုင်းမှာ မြန်မာတွေရော တိုင်းရင်သူ တိုင်းရင်သားတွေ ပါ အနှိမ် ခံ ရတာက ရင်နာစရာပါ။ မလေး စင်ကာပူ အတူတူကြီးပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အစိုးရရော အတိုက် ခံပါ မျိုးချစ် စိတ်ကို မွေးသင့်တယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် စဉ်းစားသင့်တယ်ထင်လို့ပါတယ်။ခင်ဗျာကိုယ်တိုင်း၊တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ သူဆိုတာကတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး အချက်အလက် တချို့ကို ခင်ဗျား သဘောမတူတာတွေကို ရဲရဲ တင်ပြလာတာ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ ဒီမိုကရေစီ မှာ မတူညီကြတဲ့ အတွေးအခေါ်ဆိုတာ ရှိကိုရှိရမယ်။ ဒီလို ရှိမှ အပြိုင်အဆိုင် တွေးမယ် ၊ ဖက်စုံတွေးမယ် ဒီကမှ အသစ်အသစ်တွေဖြစ်ပြီး တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။ နောက်မို့ ဆိုရင် အာဏာရှင်အောက်မှာလို အားလုံး ပုံတူ စက်ရုပ် တွေဖြစ် ကုန်ကြ ချီရဲ့။ ဒီအတွေး နောက်ခံနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ဆွေးနွေးချက် ကို လုပ်တာပါ။ နောက် တချက် က မေးခွန်း ရှိကိုရှိရမယ်။ ဒီမေးခွန်းကိုဖြေရင်း ၊ ဆွေး နွေးရင်း နှစ်ဖက် အကျိုး ရှိလာ နိုင်တယ်။ ဒီကမှ တူညီမှုရရင်ရ မရ ရင် ကွဲပြား တဲ့ အတွေးအခေါ်သစ် တွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်တာပေါ့ဗျာ။
ဥပမာ ဦးဇင်းတို့ အိမ်နည်းချင်း ထိုင်းနိုင်ငံဟာ စစ်တပ်က အနောက်က အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတခုပါ။ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံလည်း မဟုတ်တဲ့ အတွက် အားလုံး အတုယူဖို့ ဦးဇင်းဘယ် ပြောရဲပါ့မလဲ? ဘယ်နိုင်ငံမဆို ကောင်းတာကိုယူ မကောင်းတာကို ပယ်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ စရိုက် ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ကိုက် အောင် ဖေါ်ထုတ်ကြရမှာပေါ့။ ဦးဇင်း ပြောချင်တာကတော့ အစကတည်းက အစိုးရဖက်ရော အတိုက်ခံ ဖက်ပါက အတုယူစရာတွေရှိတယ်လို့ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်တပ်ချင်း မတူတာကိုလည်း ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအပြောင်းအလဲမှာ စစ်တပ်အစိုးရ ဟာ ဆင်းရဲသားတွေကို မမေ့သင့်ဖူး နောက် မိမိတို့စီးပွားရေး နားမလည်တာ ကို သတိရှိပြီး အိမ်နည်းချင်းတွေမှာ လို စီးပွားရေးကို နားလည်တဲ့ အရပ် သားလက်ထဲမှာ ထားပြီး ၀င်မရှုပ်ဖို့ ဆိုတဲ့ စေတနာ ကိုအခြေခံပြီးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
ဒီမှာ ဦးဇင်းတို့က လက်တွေ့ကျကျကိုအခြေခံပြီး စဉ်းစားစေချင်တာပါ်။ ဒါကြောင့် တော်လှန်ကြ ဆိုတဲ့ စစ်ချီသံတွေပဲ ထပ်တလည်လည် ပေးနေပြီး တကယ်တော့ အသံပဲရှိကြပြီး စစ်တပ်ကြီး က လေထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ မြန်မာလူထု ဟာ နင်းပြား ဘ၀က မလွပ်ပဲ ဘာမှ မတိုးတက် လာဖူး။ လက်တွေ့သမား မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရင် အိမ်နည်းချင်းနိုင်ငံကစစ်တပ် နဲ့ နိုင်ငံရေးစံနစ် ဟာ အတုခိုးစရာကောင်းလောက်အောင် ဘာကောင်းလို့လဲ လို့ ငြင်းချက် ထုတ်နိုင်ပေမဲ့ လက်ရှိမှာ အိမ်နည်းချင်းပြည်သူ တွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေ ထက်အများကြီး လွပ်လပ် တယ် အနေအထိုင် အဆင့်အတန်း မြင့်ကြတယ်။ အိမ်နည်းချင်းနိုင်ငံ မှာ တိုက်နဲ့ ကားနဲ့ တ၀ီဝီ ဖြစ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ဦးဇင်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော့ ဓနိတဲ နဲ့ နွားလှည်း မြင်းလှည်း က မတက်နိုင်ကြသေးဖူး။ အများဖြစ်တဲ့ တောနေလူထု ကို ပြောတာပါ။ မြို့နေလူထု အများစုဟာလည်း အသက်ရှင်အောင် မနဲ ရုန်းကန်နေကြရတာပါ။ နိုင်ငံရေးစံနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေကို ခဏဘေးချိပ်ထား ဦးဇင်းတို့ မြန်မာ နိုင်ငံသား တွေ အိမ်နည်းချင်းနိုင်ငံတွေလောက် နေနိုင်တာ ဦးဇင်းမြင်ချင်တာ ဦးဇင့်းစေတနာပါ။ ဒါကြောင့် တချို့အပိုင်းတွေမှာ လက်ရှိ နိုင်ငံ ရေး အာဏါကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်ဗိုလ်လူစုလို ခင်ဗျာ အတွေခေါ်တွေက ဖြတ်စည်းနေတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ခင်ဗျာတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေက မြောက်ပေးပြီး သံဃာတွေကို နိုင်ငံရေးထဲခေါ်လာပြီး တာဝန်ပဲစွာ နေထိုင်နေတာကို သံဃာတွေဘာပြောခဲ့ပါလဲ။အခုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စကားနဲ့ပြောရရင် ဦးဇင်းကိုယ်ပိုင်းအခွင့်ရေးပါ ဦးဇင်းလုပ်သင်တယ် ထင်လို့လုပ်တာဟာ ခင်ဗျာနဲ့မဆိုင်ဘူးလိုပြောချင်းပါတယ်။ သတ္တိရှိရင်ယောင်္ကျားတွေပဲဗျာ
ဦးဇင်းလည်း သိလို့ တတ်လှလို့ရယ် မဟုတ်ပါဖူး ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်အထင်လေးကို အများသိရအောင် အထူးသဖြင့် လူငယ် တွေ အမြင်ကျယ်အောင် စေတနာနဲ့ ပြန်ဆွေးနွေးတင်ပြတာပါ။ ခက်တာက ဦးဇင်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာက၊ တချို့အတွက် မသိစိတ်မှာ လက်ဝဲ ယဉ်ကျေးမှုက ဆွဲကပ် နေပြီး ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတာနဲ့ ရန်သူလို့ သဘောထားချင်ကြတယ်။ ငြင်းကြတယ်ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်း ဆိုသလို အကြောင်းအရာ နဲ့ မူတွေကနေ သွေဖယ်ပြီး၊ ပုဂ္ဂိုရ်ရေး ဖက်ရောက်သွားကြပြီး မာန စိတ်တွေ ဖုံးလွှမ်းလာကြပြီး သူနိုင် ကိုယ်နိုင် ဖင်လှန်ငြင်းကြပါရော်။ အကျိုးနဲ့ အကြောင်းနဲ့ ရှင်းပြလည်း နားမ၀င်ကြတော့ဖူး ငါကိုမထိနဲ့ ငါ့ဆရာကို မထိနဲ့ ဆိုတဲ့ (ငါ) ဆိုတဲ့ မာနစိတ်တွေဝင်ကုန်ကြပြီး ပုဂ္ဂိုရ်ရေး တိုက်ခိုက်တာတွေ ၊ အထင် နဲ့ ရမ်းပြီးစွပ်စွဲ တာတွေ ပါလာကြပြန်ရောအခုလည်း ဦးဇင်းတို့ကို ဝေဖန်းလာကြတာကို ဦးဇင်းကတော့ အပြစ်မတင်ပါဘူး ကိုယ်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ လုပ်တဲ့ အစည်းဝေက လုပ်ဆောင်ချက်တွေတော့ မသိဘူး အကုန်သိမ်းကြုံးပြီး ဝေဖန်းတဲ့ ခင်ဗျာ အဆင့်တန်းကိုကြည်ရရင်တော့ အရက်သမားဖြစ်ဖို့က ရာခိုင်နူန်း၆၀လောက်မှာရှိမယ် ထင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဆောင်းပါးဆိုတာက စာရေးသူရဲ့ အမြင် ကို သူဥာဏ်မှီသလောက်လေး တင်ပြလာတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဦးဇင်းပြောချင်တာကတော့ တင်ပြလာရာမှာ ဘယ်အကြောင်းအရာလည်းဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ စာဖတ်သူ ကလည်း သူ့ရဲ့ သူ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ အခြေခံပေါ်မှီပြီး နားလည် လိုက်တာကိုး။ ချင်းချင်းကွဲလွဲမှု မရှိနဲ့ဦး ဘယ်ဘယ် အဆင့်ကကြည့် တာလည်းဆိုတာ ကရှိ သေး တယ်။ တခါ ဘယ်ထောင့်ကကြည့်သလဲ ဆိုတာကလည်း ပါလာပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် တခါတရံ စာရေးသူ ရဲ့ ဆိုလိုချက် ဦးတည်ချက် နဲ့ စာဖတ် သူတို့ ရဲ့ နားလည်မှု တွေဟာ လွဲချော် နေတတ်ပါတယ်။ ဆောင်း ပါးရှင် ရေးတိုင်းလည်း မှန်ရမယ် လို့မဆိုနိုင်ပါဖူး။ တခါတရံ ဆောင်းပါး ရှင်တွေ ကိုယ်နှိုက် လည်း အတွေးချော် နေတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ တခါတရံ လည်း နိုင်ငံရေး အနိုင်ရ လိုမှုနဲ့ ရာဇ၀င် အချက်အ လက် တွေကို တမင်ပြောင်းရေးတာတွေတောင် ရှိတတ်သေးတာပဲ။အခုခင်ဗျာရေထားတဲ့ အချက်လက်တွေ အမှန်ကြီးပဲလိုတော့ မအတွက်လိုက်ပါနဲ့အမှားတွေရှိတယ် ဆိုတာကိုတော့ သိပြုပါ။
ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ လက်ထက် က မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့တောင်အာရှ မှာ အလားအလာအရှိဆုံး အဆင့်မြင့် နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံသားဟေ့ ဆိုပြီး ကမ္ဘာမှာ ရင်ကော့ပြီးလျှေက် နိုင်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖက်မလိုက်အုပ်စု ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် အရှေ့အုပ်စု ရော အနောက်အုပ်စုကပါ မျက်နှာချိုသွေးကြရတယ်။တရုတ်-ကုလား ရန်ပွဲမှာ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု က ကြားလူ။ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်း။ လူတဦး တိုက်တလုံး ကားတစီး ငွေ ၈၀၀ ဆိုပြီးတောင် စိတ်ကူး ယဉ် ရဲကြတယ်။ ဒီလို စီးပွားရေးအောင်မြင်တာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် တွေက စီးပွားရေး နားလည် စေတ နာမှန်ကြလို့ပေါ့။ အခုတော့ အတိုက်ခံလုပ်ပြီး ကိုယ်အချင်အချင်ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကတော့ မကောင်းပါဘူး ခင်ဗျာကိုတိုင်း အရင်စပြီးလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်းပါတယ်။
နိုဂုံးချုပ်ပြောချင်းတာကတော့ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ကြည့်ရင် နိုင်ငံတိုင်းမှာ မျိုးချစ်သူတွေဟာ လူများစုပါ။ မိမိလူမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်ရင် မိမိလူမျိုးတွေ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်တာကို မကြည့်သင့်ဖူး ဆိုတဲ့စေတနာပါ။ နောက် အရေးကြီးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လူငယ်လူကြီး အများစု ဟာ လက်ဝဲ အယူအဆ တွေကသာ ဆင်းရဲသားတွေကို ငဲ့ငြှာတယ်ထင်ကြပြီး ၀ါဒမှိုင်း တိုက်တာကို ခံကြရတယ်လို့ ခံစားရမိတယ်။ ဒါကြောင့် ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ လက်ဝဲ အယူအဆ အစား ၀ါဒကျမ်းတွေလည်း ကြေညက်အောင်နားလည်ဖို့ မလို ၊ လူတန်းစား တစု က တခြားလူတန်းစားတွေကို ရန်သူအဖြစ်မြင်ကြပြီး ဖြုတ်-ထုတ်-သတ် ပွဲတွေကျင်းပပြီး အချိန်ဖြုန်းစရာမလို။ အရင်းရှင်လည်း မြန်မာပြည်သားပဲ ၊ ဆင်းရဲသားလည်း မြန်မာပြည်သားပဲ ၊ ကော်လိပ်ကျောင်းသား ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသား၊ စစ်ဗိုလ် စစ်သား ၊ ရှမ်း ကချင် ကရင် ရခိုင် ချင်း တွေလည်း မြန်မာပြည်သားတွေပဲ။ အားလုံးကို ဆင်းရဲ တွင်း ထဲ ကန်ချမဲ့ အစား အများစု ကို လူစဉ်မှီ အောင် လူလတ်တန်းစား ဖြစ်အောင် (ဆွဲ) တင်နိုင်မဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လျှောက်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နည်းအရ (နိုင်ငံရေး) အာဏါယူပြီး အများပြည်သူကို အကျိုးပြုမဲ့ စီးပွားရေးကို ကျင့်သုံးမဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို အရင်းခံတဲ့ အကြောင်းကို ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ အစ အကောင်းထည့်ဖေါ်ပြီး ခင်ဗျာကိုတိုင်းရှေ့ကလုပ်ပါ ဦးဇင်းနောက်က လိုက်ဖို့အစဉ်သင်ပါပဲလို့ပြောချင်းပါတယ်။
All Buemses Monks Representative Committee.(ABMRC)
- အာရိုက် နိုင်ငံရေး မှ ရုန်းထွက်ကြစေလို
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 11:26 AM